“Paul Pogba wuxuu ku fiicnaan doonaa Real Madrid” _ Raphael Varane – Gool FM
Dajiye July 31, 2019
(Madrid) 31 Luulyo 2019. Daafaca reer France iyo kooxda Real Madrid Raphaël Varane ayaa cadeeyay in ninka ay isku wadanka yihiin una ciyaara Manchester United ee Paul Pogba uu wax weyn ku soo kordhin doono Los Blancos hadii ay dhacdo inuu yimaado garoonka Santiago Bernabéu.
Raphael Varane ayaa sidoo kale tilmaamay inuu kalsooni weyn ku qabo ciyaartoyda ay haatan heysato kooxda Real Madrid.
Waxaa jira warar la xiriirinaya in Paul Pogba uu ku biirayo kooxda Real Madrid, kaddib markii uu sidaas codsaday macallinka reer France ee Zinedine Zidane.
Kooxda Real Madrid ayaa haatan heleysa eedeeymo kala duwan kaddib guuldarooyinkii ay kala kulmeen kooxaha Atletico Madrid, Sevilla iyo Tottenham Hotspur.
Yeelkadeeda, Raphaël Varane ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay wararka lala xiriirinayo Real Madrid laacibka reer France ee Paul Pogba wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleenayaa inaan heysano koox aad u adag, laakiin xaqiiqdii Pogba waa ciyaaryahan weyn, sifiican ayaan u aqaanaa, wuxuuna ku fiicnaan doonaa koox kasta uu ku biiro”.
“Balse waxaan hubaa sidoo kale inaan ku kalsoonahay ciyaartoyda ay haatan heysato kooxda Real Madrid”.
“Waxaan fahamsanahay fikradda ah inaad ubaahantahay inaad had iyo jeer horumar sameyso, waxaana ka shaqeeneynaa arrintaas, waxaan sidoo kale doonayaa in Real Madrid ay guuleysato, laakiin waxaan qabaa inaan u soo fiicnaan doono si tartiib tartiib ah, maxaa yeelay waxaan diirada saareynaa shaqada iyo tababarka”.
Halyeey hore ee kooxda Man United ah oo ku taliyay in la iibiyo Pogba, xilli uu sidoo kale ka hadlay Gareth Bale
Nicolas Pepe oo markiisii ugu horreysay lagu Sawiray maaliyadda Kooxda Arsenal